Famokarana milina fihenam-bidy sy orinasa | XiongYe
Masinina manify EPS sombin-javatra dia milina manadanja tena ilaina toy ny milina fantsom-boaloboka hafanana CNC, ho an'ireo orinasa, izay mamokatra endrika amam-bika vita amin'ny maritrano. Ny velaran'ireo modely haingon-trano, izay nosoratany amin'ny sisin'ny EPS, dia tokony hosaronina milina fanosotra, mba hiarovana ny tampon-trano amin'ny toetr'andro manimba (toy ny oram-panala, oram-panala, havandra, oram-baratra ary hafanana eo anelanelan'ny andro sy ny alina)
Ohatra, tsy afaka mahazo vokatra kalitao voalohany ianao raha diso ny masinina manarona foam na ny mortir anao na dia mampiasa milina fanapahana foam tsara kalitao indrindra eto an-tany aza ianao.
Noho izany, ny milina rehetra ao amin'ny ozininao dia manana lanjany mitovy. Tena zava-dehibe amin'ny fanatontosan'ny orinasanao ny fividiananao ireo masinina mifanentana ary azo ampifandraisina.
fivarotana ivelany manaingoana ny safidy mety.
EPS misoson-tsofina amin'ny EPS
Raha te-hamorona orinasa mifaninana ianao ary hanana isan-jato mitombo eo amin'ny tsenan'ny indostrian'ny fananganana dia mila mamokatra ny vokatra farany misy kalitao azo ekena ianao.
Araka ny fantatra, ny vokatra dia tokony ho hita miharihary amin'ny fipetrahana amin'ny toerana tsara eo amin'ny tsenanao kendrena. Ka ny zava-dehibe indrindra dia ny fisehon'ny maodelin'ny endrika haingon-trano tokony ho malama sy madio tanteraka. Ary koa ny zorony dia tokony ho mazava sy mahitsy. Ary ny farany dia tsy tokony hisy bubble hita eny ambonin'ny vokatra. Tokony hikarakara ireo fepetra ireo ianao mba hampitomboana ny fahombiazan'ny milina fanosotra kapa.
Hatevin'ny lamba misarona
Ankehitriny, manana fahalalana ankapobeny momba ny coating kapa ianao, ka andao hiresaka aminao ny momba ny fahalalana teknika ambony.
Ny isan'ny mortir milimetatra firakotra mifangaro amin'ny foam dia tena zava-dehibe toy ny kalitaon'ny rihitra amin'ny foam rehefa manamboatra profil ivelany ivelany sy vokatra ivelany hafa.
Azonao atao ny manarona araka izay tadiavinao eo anelanelan'ny 1 milimetatra sy 10 milimetatra amin'ny alàlan'ny milina fanosotra kapa. (Ny hatevin'ny mortar iraisan'ny vokatra ivelany izay tiana indrindra amin'ny kalitao tsara sy ny sokajy vokatra ara-toekarena manerantany dia 2 mm / 3 mm ary 4 mm.) Tsy fomba fiasa marina io fiheverana fa "ny vokatra izay mifono matevina io dia matetika tsara kalitao."
Daty masinina mahazatra azafady mifandraisa aminay, na mamela hafatra, handefa anao tsy ho ela.
Previous: Masinina sifotra polyurethane
Manaraka: Masinina fanoratana sombin-tarehimarika fanaraha-maso